दुहबीमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालनमा – Khel Dainik
दुहबीमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालनमा
दुहबी (खेलदैनिक) । नेपालमा खेलकुद गतिविधीले गति लिंदै गर्दा विभिन्न शहरहरुमा स्पोर्टस एकेडेमीहरुको स्थापना हुने क्रम पनि जारी छ । त्यसैक्रममा सुनसरी स्थित दुहबीमा पनि दुहबी स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालनमा आएको छ ।
एकेडेमीको शनिबार एक कार्यक्रमका बीच दुहबी नगरपालिकाका मेयर बेद नारायण गच्छदारले उदघाटन गरे । एकेडेमीका अध्यक्ष निश्चल राज शाक्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य एकेडेमीका सचिव रबी कार्कीले शुरु गरेका थिए ।
यो स्पोर्टस एकेडेमीको स्थापनासँगै जिल्लामा मात्र नभएर देशमै यसले राम्रा खेलाडीहरु उत्पादनमा विशेष र अहम भूमिका खेल्ने उपस्थित अतिथीहरुको भनाई थियो । उता एकेडेमीका अध्यक्ष शाक्यले सबैको सहयोग र हौसलाले नै एकेडेमी स्थापना गर्न आफूहरु सफल भएको चर्चा गर्दै उनले आगामी दिनहरुमा पनि सबैको सहयोग र समर्थनको खाँचो रहेको औंल्याए ।
सोही अवसरमा बिभिन्न खेलकुदहरुमा सफल हुने खेलाडीहरूलाई प्रमुख अतिथी दुहबी नगरपालिकाका मेयर बेद नारायण गच्छदारले ट्र्याकसुट बितरण गरेका थिए ।
← क्लबस्तर मै तयार भयो कृत्रिम टर्फ मैदान, मैदानको उद्घाटनसँगै नगर प्रमुखको ह्याट्रिक । अमुवा र सौभाग्य प्रिक्वाटरफाइनलमा, पहिलो चरणको अन्तिम खेलहरु सोमबार →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने मंसिर २१, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? मंसिर २१, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली मंसिर २१, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा मंसिर २१, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित मंसिर २१, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा मंसिर २१, २०७७